Isitudiyo esigcwele i-AC Q no-F yabashadile ePraia do Rosa - I-Airbnb
Isitudiyo esigcwele i-AC Q no-F yabashadile ePraia do Rosa
Praia do Rosa, State of Santa Catarina, i-Brazil
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-ElCa
U-ElCa Ungumbungazi ovelele
Isitudiyo esikhulu, esikhululekile, esivulekile, esithokomele, esisebenzayo, esiyimfihlo futhi esivikelekile.
Idizayinelwe ukwamukela imibhangqwana emisha, ejabule ngokuphila, abathandi bemvelo namabhishi amangalisayo.
- I-Double box queen bed (inkulu futhi imnandi)
-I-WiFi enhle futhi ezinzile, i-fiber engu-60mb
-I-balcony yangasese enkulu yokuphumula ku-hammock futhi ujabulele ukushona kwelanga
- I-BW enkulu, ishawa yengilazi, usinki we-granite, ukugeza okumnandi
- Umshini ongenisa umoya Kuyashisa futhi kubanda
- imizuzu emi-5 ukusuka ogwini ngemoto (2 km)
- 1300m ukusuka enkabeni
Isitudiyo esiphelele kakhulu nesiyimfihlo, esiklanywe futhi senziwe ngothando nokunakekelwa okukhulu.
Ivulekile, inethezekile futhi ihlome kahle kangangokuthi ufuna ukuhlala ku-studio S2.
Isendaweni ephephile nethule, nokho isaseduze nayo yonke into. Uyasazi leso siphephelo? Ukuthi uma ufuna ukwenza iphathi nephathi, kufanele nje uhambe, kodwa lapho ubuya ungakhululeka futhi ube nokuthula nokuthula? Manje.
Sikumizuzu emi-5 kuphela ukusuka ogwini ngemoto, futhi imizuzu eyi-15 sihamba ukusuka esikhungweni lapho amabha, izitolo, izindawo zokudlela nama-nightclub atholakala e-PDR, kodwa ngenzuzo enkulu yokungawutholi umsindo nokuphithizela kwalezi zindawo.
I-Studio ikhululekile futhi ivulekile. Kuyi-suite enomehluko wokuba nekhishi elididiyelwe kanye novulandi othokozisayo obheke ingadi. Ukusuka kuvulandi ungabuka futhi izintaba nokushona kwelanga okuhle nezihlahla zesundu ezinyakaziswa umoya. I-balcony ilungele ukuphumula ilele ku-hammock ujabulela imvelo.
Inombhede webhokisi olingana nendlovukazi omkhulu kakhulu onomatilasi wamathambo, izingubo zokulala ezisezingeni eliphezulu, imicamelo nengubo yokulala; 32" LCD TV; ikhishi eliphelele eline-microwave, blender, sandwich maker, minibar, granite counter kanye netafula; indlu yokugezela eneshawa yengilazi, isibuko esikhulu kanye neshawa kagesi kwenzelwa ishawa elimnandi nelivuselelayo.
I-Wi-fi yinhle kakhulu futhi izinzile, nge-60mb optical fiber.
Futhi ngaphezu kwakho konke ukunethezeka kwangaphakathi kwendawo yokuhlala, endaweni evamile sine-barbecue kanye nehhavini ye-pizza yokhuni. Kuyinto ejabulisayo futhi ethokozisayo ngempela ukubhaka i-pizza yakho kuhhavini okhokhelwayo!
Futhi siyakwazi ukufinyelela echibini lase-Ibiraquera, indawo enhle nenhle yokuhamba nge-kayaking, i-stand up paddle and kite surfing, okunikeza ukushona kwelanga okumangalisayo okuphelele kokucabanga ngemvelo nokuphumula.
Kuyoba intokozo nodumo ukukwamukela, uzenze ekhaya.
- North Rose 2km
- I-South Rose 3km
- Centrinho do Rosa 1.3km
- I-Praia do Luz ne-Barra da Ibiraquera 4km
- Ouvidor Beach 3km
- Centre of Garopaba 18km
Ngiyabonga kakhulu futhi konke okuhle.
Isifunda sasePraia do Rosa sisonke siyamangalisa. Kungakhathaliseki ukuthi okwevayibhu eyingqayizivele nemnandi noma amabhishi amaningi. Ekugcineni wonke umuntu uyezwa ngoRosa, kodwa ngaphandle kweRosa kukhona amanye amabhishi amahle nalondoloziwe okufanele ahlolwe futhi ajatshulelwe ngokugcwele. Kungcono ukuba semotweni.
I-Tb inamachibi, izindunduma, amaphathi, amabha kanye nezindawo zokudlela ezinhle... ngamafuphi, inqwaba yamathuba.
Siyathanda ukwamukela izivakashi zethu mathupha, kodwa ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-Corona Virus, sibeka phambili ukuzihlola kanye nosizo lwe-inthanethi ngaphandle kokuyeka ukuba khona cishe. Ngakho-ke siyaqhubeka nokudlulisa uthando namathiphu abalulekile ngokuhlala kwakho, njengokuthi yiziphi izindawo ezingcono kakhulu ogwini ongavakashela kuzo, amabhishi ahlukene aseduze, izindawo zokudlela nokuzijabulisa, njalonjalo.
Sihlale sikhona ukuze sisize nganoma yini edingekayo.
Siyathanda ukwamukela izivakashi zethu mathupha, kodwa ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-Corona Virus, sibeka phambili ukuzihlola kanye nosizo lwe-inthane…
UElCa Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Praia do Rosa namaphethelo